Puri Rath Yatra 2018 nchịkọta | Kpọọ: + 91-993.702.7574
Ị bụ ezi onye na-eso Hindu? Na-achọ ebe okpukpe kwesịrị ịga leta n'oge ndụ gị, gbakwunye Puri Rath Yatra 2018 na ndepụta gị! Ọfọn, Puri Rath Yatra bụ n'ezie ihe a ga-eji ma ọ dịkarịa ala otu oge.
Na-agba akaebe kachasị ememme na mbara ala Rath Yatra, ebe chi dị iche iche na-esi n'ụlọ nsọ ahụ apụ, na-agbagha ihe mgbochi nke okpukpu, okpukpe, na usoro iji zipụ ozi nke ịdị n'otu na mbara igwe. Ihe kachasị mkpa, ụgbọ mmiri buru ibu, ikuku ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri ozuzo na mberede na-eme ka ememme kachasị nsọ na India, Rath Yatra 2018 bụ otu ụdị ụdị ya.
A maara ụwa nke a ma ama bụ Rath Yatra na agbapụ, nkwenkwe okpukpe na mmụọ nke mmekọrịta enyi. Ụda ụda olu, ụda, na egwu dị egwu dị ka eluigwe dabara n'elu ụwa iji mee amara n'oge. A kwenyere na ọ bụrụ na ị na-adọkpụ ụgbọ ala otu ugboro - ị ga-enweta ebe ị ga-aga eluigwe. Na, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ụwa ga-achọ ịhapụ ya Puri Rath Yatra 2018!
Nyocha anyị / Kpọtụrụ anyị
Puri Rath Yatra 2018 nchịkọta
SandPebbles na-enye nchịkọta dị ịtụnanya maka Puri Rath Yatra Tour, ka ị nwee ike ịnweta njem na-enweghị isi na ebe obibi n'oge oge kachasị anya nke obodo ahụ. Ma ị chọrọ ịga site na Bhubaneswar ma ọ bụ nọrọ n'obodo n'oge Puri Rath Yatra, anyị na-eme ndokwa niile site na ụlọ oriri na nkwari akụ iji na-agba ịnyịnya, njem, na ihe niile, iji mee njem nleta gị na-echefu echefu. Anyị Puri Rath Yatra 2018 ngwugwu gụnyere:
Ụbọchị 1: Na-abịa Bhubaneswar
Otu n'ime ndị nnọchianya anyị ga-enweta gị na Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar ma duru gị gaa n'ụlọ nkwari akụ ahụ. Ọ bụrụ na ụgbọ elu ahụ abịa n'ụtụtụ, ị nwere ike ịga na Smart City ma ọ bụ nwee ike ịhapụ Puri, naanị 60 Km na-apụ n'obodo ahụ. Nri abalị ga-eje ozi n'ụlọ nkwari akụ ahụ.
Ụbọchị 2: Gaa n'ụlọ nsọ Jagannath
Mgbe nri ụtụtụ na-aga Puri na-aga eleta Dhauli (Ashokan Rock Edict na Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Sakshigopal (Radha Krishna Temple) & Raghurajpur / Naikpatna (Ụlọ Nkume). Na-abịa na Puri, Lelee n'ime ụlọ nkwari akụ. Nleta abalị na Onyenwe Jagannath Ụlọ Nzukọ na-esonye na Live Aalati Darshan (A naghị anabata ndị na-abụghị Hindu n'ime ụlọ nsọ ahụ). Ịkwesighi ịga "Char Dham" iji nweta "Moksha" (nzọpụta), mgbe ị gara n'Ụlọ Nsọ nke Puri. Ịlaghachi na ụlọ nkwari akụ.
Ụbọchị 3: Rath Yatra
Mgbe nri ụtụtụ gaa Puri Badadanda. E mere ndokwa pụrụ iche n'elu ụlọ nke ụlọ nkwari akụ maka ikiri Rath Yatra. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ Rath Yatra si n'elu ụlọ jiri nwayọọ na-aga n'isi ụtụtụ. (Nri nri ụtụtụ, obere mmiri, nri ehihie (veg) ga-enye gị.
Ụbọchị 4: Puri na-ahụ anya
Mgbe nri ụtụtụ, kwadebe maka nlegharị anya. Gaa na Narendra Pokhari, ụlọ nsọ Lokanath, Ụlọ nsọ Markandeshwar, Ụlọ nsọ Lakshmi, Ụlọ Nsọ Ganesh, Gundicha Temple, Swargadwar, Raghurajpur Nhale Obodo, Bimala Temple na ọtụtụ ndị ọzọ. Laghachi na nkwari akụ ma rie nri abalị na ezigbo ụra abalị.
Ụbọchị 5: Obi ụtọ Puri Beach
Ebe mgbakọ maka ọtụtụ ndị pilgrim, bụ ndị na-abịa maka ịbịaru omenala ahụ. Otu n'ime ebe kachasị mma ọlaọcha dị n'India, ebe mmiri mmiri nke Bay of Bengal na-asọpụrụ ịma mma ha. Ị nwere ike ịnụ ụtọ ebili mmiri na-ebili mmiri n'ihu osimiri na-enwe ụtọ nke ice cream na ihe oriri ndị ọzọ ma ọ bụ na-aga ogologo okporo ụzọ Puri-Konark Marine Drive.
Ụbọchị 6: Ịzụ ahịa na Puri
Mmadụ enweghị ike ịchọta nkà ndị dị na Puri. Chọta maka ọla ọcha ọlaọcha na ịzụta Sambalpuri na ndị na-akwa ákwà Bomkai ga-ejikwa arụ ọrụ ha dị egwu gbaa gị ume.
Ụbọchị 7: Mbanye na Konark
Ewezuga ịga ememe Ratha Yatra, ndị njem na Puri nwere ike ịchọ ụfọdụ nhọrọ ndị njem nleta ndị ọzọ na-abaghị uru. Puri Beach, Konark Beach, Konark Sun Temple bụ ụfọdụ n'ime njem nleta na-adọrọ adọrọ na Puri. Mgbe nri ụtụtụ gara Konark Sun Temple, ASI Museum (Emechibidoro na Friday), Ụlọ ahịa Ramchandi & Chandrabhaga Beach. N'ehihie n'ehihie na-acha odo odo ma na-ezumike n'ọdụ ụgbọ mmiri Puri. N'abalị na Puri.
Ụbọchị 8: Ọpụpụ
Mgbe nri ụtụtụ kwụsịrị na Bhubaneswar Airport / Ụgbọ okporo ígwè maka ịga njem.
Aarti Tikka na nbata
Ezinụlọ na Star Hotels
Nri abalị & ụtụtụ
Ihe niile na-enyefe naanị ụgbọ ala AC
Weghachite ụgbọ ala na-enyefe na PVT Car
Puri-Konark Marine Drive (Seat na ụgbọala ma ọ bụ ndị nkuzi)
Puri Sightseeing tour + Jagannath Ụlọ Nzukọ + Konark (oche n'ụgbọala ma ọ bụ ndị nkuzi)
Ma ị na-ekwu maka ụlọ nsọ ndị mere eme, ebe ncheta, ebe obibi anụ ọhịa, ememme, ebe ndị mara mma, omenala ma ọ bụ nri - enweghị mmasị na steeti ala. Ma, omenala Jagannath nwere ihe, nke na-eme ka ndị India ọ bụla dị mpako.
Batara n'ala Chineke. Odisha na-eche ka ị bịarutere.